Ahoana ny fomba hanampiana ny vokatra bokeh amin'ny sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny vokan'ny bokeh Nanjary tao anatin'izay taona lasa izay izay reharehan'ny mpanamboatra telefaona sasany rehefa mampiseho ny vaovaon'izy ireo amin'ny tsenan'ny finday izy ireo. Betsaka ny rindranasa sy ireo telefaona ireo izay mampiditra an'io vokatra io ho fenitra hahafahantsika mizara ny sarinay amin'ny tambajotra sosialy sy ny tamba-jotra.
Na dia manana ny Adobe Photoshop foana aza izahay hahafahana manazava sy mamorona vokatra bokeh miaraka amina famaranana tsara kokoa noho ny soso-kevitr'ireo rindrambaiko sasany. Izany no antony hampianaranay anao ny fomba hanampiana ny bokeh effet ho an'ity sary ity amin'ny alàlan'ny halehibe toy izany, toy ny nataontsika tamin'ity lesona ity, ary izany dia afaka nanova ny firafitry ny famolavolana, ny fanoharana ary ny famerenana indray ireo tao anatin'ny folo taona lasa.
Ahoana ny fomba hanampiana ny vokany bokeh amin'ny sary
Handeha aloha isika zarao ny sary azonao sintonina sy ampiasainao hanarahana ny fampianarana ary mihodina amin'ny sanda sasantsasany:
Ny zavatra voalohany dia ny mifantina ny fitaovana fifantenana haingana miaraka amin'ny bokotra W.
Izahay dia tsindrio imbetsaka eo ambadiky ny sary raha mitazona ny lakilen'ny famindrana.
Raha mandinika ny safidintsika isika, rehefa manitsy azy io bebe kokoa ho an'ny tarehin'ireo mpivady isika dia afaka mampiasa alt miampy kitiho totozy hamafana faritra sasany.
Vantany vao voafantina ny fototra, aodinay ny safidintsika amin'ny fifehezana + sora-baventy + I.
Tsindrio indray izao ny fanalahidy W ary tsindrio eo amin'ny bokotra ambony «Select and apply ...».
Ao amin'ny varavarankely pop-up dia mampiditra radius 4px izahay.
Mandritra ny varavarankely, manitatra ny "Output setting" izahay ary amin'ny Send to, dia misafidy ny "New layer with layer mask".
ankehitriny fifehezana + kitiho ny sarontava noforonina teo amin'ilay sosona mba hisafidianana indray ary safidio ny aoriana.
Mandeha amin'ny Selection> Modify> Expand> 1pixel izao izahay.
Miverina amin'ilay tranokala iray ihany, fa nifidy Fade> 1pixel izahay.
Izahay izao dia manamarina ny fisafidianana natao tamin'ny foibe + backspace hamenoana.
Amin'ny varavarankely manaraka misafidy amin'ny Atiny izahay Araka ny atiny ary tsindrio OK.
Esorinay ny fahitana ny sosona amin'ilay maska, ary tsy maintsy ho hitantsika tsara ilay tarehimarika rehefa esorintsika ny fisafidianana amin'ny fifehezana + D.
Ary eo amin'ny sehatra afovoany dia misafidy ny sivana> Blur effet blur> Blur an-tsaha isika.
Avoninay kely ny afovoany.
Ankehitriny isika dia lohany mankany Soft Bokeh hamindra izany hatramin'ny 65%.
Amin'ny hazavana dia avelantsika eo amin'ny 195 ireo slider roa.
Ary ao amin'ny Blur, manodidina ny 32 teboka.
Ampiharintsika amin'ny OK ny blur. Ity ny vokatra farany:
Ny vokan'ny bokeh miankina amin'ny sary ananantsika io, noho izany dia olana amin'ny fitsapana mandra-pahitanao ny vokatra tadiavina amin'ireo masontsivana telo farany ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hanampiana ny vokatra bokeh amin'ny sary amin'ny Photoshop
Fitaovana UI UI 10 tsara halefa maimaim-poana